This report documents the rich biodiversity found in Khoe Kay,abend in the Salween River and exposes the severe threats faced by this stretch of the Salween, both from large dams and ongoing militarization. The report finds Khoe Kay to be studded with both plant and animal diversity, identifying 194 plant species and 200 animals. Forty two of these species are considered endangered and can be found in IUCN’s red list, the CITES appendices, or both; thus showing the urgency in protecting and promoting conservation in this area.
ဤအစီရင်ခံစာသည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိသံလွင်မြစ်ကွေးတစ်နေရာဖြစ်သောခိုကေဧရိယာ တစ်ဝိုက်တွင်သက် ရှိမျိုးစိတ်များ မည်မျှရှိသည်၊ ထိုသက်ရှိမျိုးစိတ်များသည် လက်ရှိဆောက်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားပြီဖြစ်သော ရေကာတာကြီး များနှင့်မပြီးဆုံးသောစစ်များကြောင့် မည်ကဲ့သို့ဘေး အန္တရယ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်နှင့်ပတ် သက်ပြီးပြီးလုပ်သောသု တေသနများမှအကြောင်းအရာများကို အခြေခံကာပြုစုထားသောအစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။ သုတေသနမှတွေ့ရှိ ချက် များအရ ခိုကေဧရိယာတစ်ဝိုက်တွင် အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁၉၄ မျိုးနှင့် နို့တိုက်သတ္တဝါ ၂၀၀ မျိုးရှိရာထိုမျိုးစိတ်များ အ နက် ၄၂ မျိုးသည် International Union for Conservation of Nature၊ နှင့်Convention on International Trade in Endangered Species တို့၏သတ်မှတ်ချက်အရ မျိုး တုန်းလုနီးပါးဖြစ်နေပြီဖြစ်သော သက်ရှိမျိုးစိတ်များဖြစ် ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့်ထို မျိုးတုန်းလုနီးပါး ဖြစ်နေပြီဖြစ်သောသက်ရှိမျိုးစိတ်များအား ထိန်းသိန်းကာ ကွယ်နိုင်ရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဇီဝသက်ရှိထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အများသူငှာမြင့် တင်ပြုလုပ်လာစေရန် အတွက်သော်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်ပြီးဤအစီရင်ခံစာကို ပြုစုထုတ်ဝေလိုက်ပါ သည်။